Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga oo sheegay in Soomaaliya lagu haayo cadaadis ka dhashay Khilaafka Khaliijka – Awdal State Economic and Political Council
HomeWararka SoomalidaWasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga oo sheegay in Soomaaliya lagu haayo cadaadis ka dhashay Khilaafka Khaliijka
Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga oo sheegay in Soomaaliya lagu haayo cadaadis ka dhashay Khilaafka Khaliijka
May 12, 2018 Wararka Soomalida
Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa sheegay in Soomaaliya lagu haayo cadaadis xooggan oo ka dhashay mowqifkii ay ka istaagtay khilaafka Khaliijka.
Khudbad uu u jeediyay saxafiyiin ka kala socday18 dal Carbeed oo shir uga socda magaalada Istanbul ayaa sheegay in Soomaaliya lagu cadaadinayo inay dhinac la safato, taasoo uu xusay inay tahay wax aan la qaadan karin.
Mr Mevlüt Çavuşoğlu ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in la xurmeeyo midnimada iyo madax banaanida dalalka.
Waxaa uu sheegay in aan loo baahneyn in aan dalalka looga faa’ideysan duruufaha adag ee ay ku jiraan, isagoo ugu ugu baaqay dalalka Islaamka iyo Carabta in ay iskaashadaan isna caawiyaan halkii ay is cadaaweyn lahaayeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa wajaheysay caqabado siyaasadeed, tan iyo wixii ka dambeeyay markii Xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay xiriirka u jareen dalka Qatar, iyadoo dhowr jeer lagu cadaadiyay inay taageerto, hase ahaatee ay mowqif dhex dhexaad ka qaadatay.
Xiisadda siyaasadeed ee Khaliijka ayaa u muuqda mid u soo wareegtay Soomaaliya, iyadoo xilligan uu hardan ka dhex socdo, Xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinac ah iyo Qatar iyo xulufo la ah Turkiga.
Madaxweynaha Koonfurgalbeed Shariif Xasan oo dib ugu laabtay Baydhabo (Sawiro)